Ingxelo entsha ngokusebenzisana kuka-Apple noToshiba | Ndisuka mac
Ingxelo entsha ngokusebenzisana kuka-Apple noToshiba
UJavier Porcar | | Izaziso
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, ugxa wethu uJavier, usinike i Umdla ka-Apple kuToshiba. Kwiiyure zokugqibela, ngokukaReuter, isikhululo sikanomathotholo saseJapan, i-NHK iqinisekisile ukuba iApple inomdla wokufumana isahlulo secandelo leChips lenkampani yaseAsia. Esi sivumelwano siza kwenza ukuba kube lula ngeToshiba ukuthumela izinto kwamanye amazwe, ngokuyinxalenye ukuthintela imigaqo engqongqo karhulumente. Etafileni, iApple inesindululo sokufumana iipesenti ezingama-20 zesahlulo semiconductor. Esi sivumelwano siya kuba luncedo kuwo omabini amaqela, njengoko uToshiba eza kuqhubeka nokusilawula.Nangona kunjalo, iApple inenjongo yokuba liqabane elifanelekileyo kwinkampani kwaye ingabi ngumtyali mali nje. Isiphakamiso esenziwe yinkampani ye-apile yi-30% yenkunzi kwaye uToshiba uyayixabisa. Ngokukodwa, isithembiso esenziwe licandelo le-Apple eliphetheyo, iFoxconn, yi- $ 27.000 yezigidigidi. Nangona kunjalo, ubudlelwane obugcinwa yiApple neenkampani zaseTshayina (ukhuphiswano ngqo kwiJapan) badlala ngokuchasene nesivumelwano.
Kwelinye icala, iziphumo ezibi ezifunyenwe kwisahlulo seToshiba, ukuya kuthi ga kwi-9.000 yezigidi, bayinyanzela ukuba ithengise, ukufumana ukuthengiswa. Ke ngoko, akukhutshelwa ngaphandle ukuba iToshiba ithengisa ngexabiso eliphantsi. Kungenxa yoko I-Apple kunye nezinye iinkampani ziphanda imakethi ukuba ibe liqabane elifanelekileyo kwinkampani enkulu.
Kodwa iApple ayisiyiyo yodwa ekunikezelweni. Abanye abakhuphisana ngokuthe ngqo kwimveliso yeesemondonductor bakwakhangela intengiso yesabelo esikhulu saseJapan, kubandakanya IHynix. Kwelinye icala, i Urhulumente waseJapan Uceba ukunceda inkampani, ngokutyala imali eyi-4.600 yezigidigidi zeedola. Kukwathethwa ngako I-Western Digital Corp, Njengomnye umdlali ebhodini.
KwiApple ezi ntlobo zothethathethwano azikho ntsha. Unamava ekufumaneni i-Sharp kwi-2016. Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo siyakwazi iziphumo zokugqibela zothethathethwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ingxelo entsha ngokusebenzisana kuka-Apple noToshiba
I-tvOS 11 inokubonelela ngeakhawunti yomsebenzisi kunye nomsebenzi womfanekiso-mfanekiso
IMacBook Pro ngaphandle kweTB, iMacOS 2 beta 10.12.5, ukukhumbula kukaWalt ​​Mossberg, kunye nokunye. Eyona veki igqwesileyo kwiSoydeMac